MESIN'NY FANORENANA Mpanamboatra sy mpamatsy - China Factory EARTHMOVING MACHINES
BONOVO Medium Digger xcavator Masinina mihetsika amin'ny tany ho an'ny fihadiana
Bonovo dia manolotra karazana mpikaroka mpikaroka isan-karazany amin'ny halavany antonony manomboka amin'ny 20 taonina ka hatramin'ny 34 taonina. Ity mpitrandraka mpikaroka 20 taonina avy any Bonovo ity dia namboarina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tsenan'ny mpiasa antonony. Ny fikirakirana avo lenta, ny maotera avo lenta turbocharged misy paompy mekanika dia misy heriny lehibe, fanjifana solika ambany ary fampifanarahana solika matanjaka. Tanjona tsara amin'ny iray amin'ireo sehatra mpifaninana indrindra amin'ny tsenan'ny mpitrandraka, ny excavator mpikaroka WE220H an'i Bonovo no mpiara-miombon'antoka tonga lafatra amin'ny fampiharana antonony.
BONOVO DIGDOG DG10 Mini Excavator misy fametahana marobe
Ity vokatra ity miaraka amin'ny fisehoana tsara tarehy, fanamafisam-peo avo, perfomance ambonimbony, fanjifana solika ambany, faritra fandidiana malalaka. Izy io dia mety amin'ny famoahana ny tany amin'ny trano fambolena legioma, ny maitso campus amin'ny departemanta monisipaly. mihady ny lavaka hambolen-kazo amin'ny akanin-jaza Fuit-land. fanorotoroana vita amin'ny simenitra, fampifangaroana fasika-vatokely, asa fanamboarana amin'ny toerana tery sns. Ampiasao ny fanenjehana haingana dia afaka manampy ireo fitaovana miraikitra toy ny auger, marbra hydraulic, siny mandoaka, gripple, ankihibe, bucket mitongilana, ripper, rake sns. Izy io dia afaka mampihena ny vidin'ny fikojakojana sy fiasa, mampihena ny herin'ny mpiasa manatsara ny mekanisation, ny fampiasam-bola ambany, ny fiverenana avo. Bonovo dia vonona hanome anao drafitra fananganana sy drafitra momba ny fividianana entana.
BONOVO DIGDOG DG12 Mini Excavator misy fametahana marobe
DG12 mini Excavator miaraka amin'ny firafitra elatra kely Tailless sy safidy amin'ny boom-side-shift, izay azo ampiasaina amin'ny fiasan'ny habaka ety
fihodinan'ny tailless, chassis azo averina, boom deflective, fanamboarana kilasy voalohany, rafitry ny pilotan'ny enta-mavesatra, làlam-by azo ovaina, motera nafarana, fenitra fiarovana ny tontolo iainana (Euro 5 sy EPA4)
BONOVO DIGDOG DG18 1,8 taonina mpitrandraka mpikaroka kely Crawler Hydraulie Mini Excavator
DG18 mini Excavator miaraka amin'ny firafitra elatra kely Tailless sy safidy amin'ny boom-side-shift, izay azo ampiasaina amin'ny fiasan'ny habakabaka
fihodinana tsy misy tailless, chassis azo esorina, boom deflective, fanamboarana kilasy voalohany, rafitry ny pilotan'ny enta-mavesatra, làlam-by azo ovaina, motera nafarana, fenitra fiarovana ny tontolo iainana (Euro 5) Azo ampiasana cabine feno mihidy mba hanomezana toerana milamina amin'ny asa.
BONOVO DIGDOG DG25 mpitrandraka mpihady bitika 2.5 tonta mihetsiketsika eto an-tany
DG25 mini Excavator miaraka amin'ny firafitra elatra Tailless kely sy safidy safidy boom-side-shift, izay azo ampiasaina amin'ny fiasan'ny habaka tery.
Ny fihodinan'ny tailless, ny chassis azo averina, ny boom deflective, ny kilasy voalohany, ny systeme d'exploitation pilot, ny lalana azo ovaina, ny motera nafarana, ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana (Euro 5) Azo ampiasana cabine feno mihidy mba hanomezana toerana milamina amin'ny asa. Afaka havaozina amin'ny motera japoney Kubota izy io ary miaraka amin'ny kokpit feno.
BONOVO DIGDOG DG20 mini excavator 2ton crawler excavator sinoa
DG20 mini Excavator miaraka amin'ny firafitra elatra kely Tailless sy safidy amin'ny boom-side-shift, izay azo ampiasaina amin'ny fiasan'ny habaka ety
fihodinana tsy misy tailless, chassis azo esorina, boom deflective, fanamboarana kilasy voalohany, rafitry ny pilotan'ny enta-mavesatra, làlam-by azo ovaina, motera nafarana, fenitra fiarovana ny tontolo iainana (Euro 5 sy EPA 4) Azo ampiasana cabine feno mihidy mba hanomezana toerana azo antoka ho an'ny asa. Azo havaozina ho any Italia CASAPPA plunger pump and system of sensing load
Mpitrandraka kely, izay azo fantarina indraindray ho mpitrandraka kely izay afaka manampy amin'ny fanamorana ny asa fananganana indostrialy sy ara-barotra. Manomboka amin'ny 1 taonina ka hatramin'ny 10 taonina, ity excavator mini ity dia manome anao fahaizana manatsara ny famokarana sy ny fotoana iasana amin'ny toe-javatra sarotra indrindra sy mihidy indrindra.
Ny excavator amphibious dia antsoina koa hoe excavator mitsingevana, izay natao manokana hiasa tsara amin'ny renirano, farihy swampy, lakandrano ary honina amin'ny faritra fanarenana dobo. Manana ekipa matihanina izahay hamolavola sy hamboarina ho maodely avo lenta sy mahavariana amin'ny excavator amphibious ho an'ny marika lehibe rehetra an'ny excavator manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 50 taonina. Ny ekipa Bonovo dia afaka manolotra vahaolana samihafa amin'ny tetik'asa toy ny paompy dredging, mandeha an-tongotra lavitra, sehatra fampidinana, sambo fizarana ary fitaovam-piadiana lava.
Safidio ny mini excavator mety ho an'ny asanao dia tena zava-dehibe hampitomboana ny vokatra. Bonovo dia afaka manolotra modely isan-karazany hifanaraka amin'ny asanao manokana, na inona na inona tadiavinao crawler na excavator misy kodiarana, Bonovo dia afaka manome anao lanja manodidina ny 0,7 ka hatramin'ny 8,5 taonina.
Bonovo mini excavator dia natao ho an'ireo mpandraharaha hanatsara ny fampiononana ny cab sy ny endri-pitehirizana solika izay manome fahafaha-manao, fahombiazana ary famokarana bebe kokoa amin'ny tranonkalanao. Azonao atao ny misafidy ny fametahana excavator hafa hifanaraka amin'ny asanao manokana, ny ekipa Bonovo dia afaka manome anao ireo kojakoja tsara indrindra sy serivisy aorian'ny fivarotana.